Tsanangudzo:iPhone 8 Plus Battery,brandnew iPhone 8 Plus bateri,iPhone 8 Plus bhetri replacement,0 cycle iPhone 8 Plus bateri,,
Home > Products > iPhone Battery > iPhone 8 Plus Battery
iPhone 8 Plus Battery Support Lastest iOS Update  Bata Ikozvino
New Zero cycle iPhone 8 Plus Battery Replacement Support Lastest iOS Update For iPhone 8 Plus 2691mAh 4.35V 10.28whr Apple yakayemura Older iPhone mifananidzo inogona kuenderera mberi nokuda kwekukwegura mabheti. Kana iwe uchida iPhone itsva Plus...
China iPhone 8 Plus Battery Vatengi
Battery ye iPhone 8 Plus A1864, A1897, A1898 Che (kwete iphone 8) (Ndapota chengetedza nhamba yemhando yepamusoro pane chinyorwa chekunze)
Nguva yakareba upenyu huri nani kupfuura kukwikwidza mabheti.
Ona Mifananidzo, isu chaizvo tinoshandisa tester kuti tione bateri chaiyo simba. kwete nokungotarisa pane zita rebheteri. Chigadzirwa chitsva chechokwadi chizere bhatiri yebheteri ine itsva flex cable, yakanyatsopindirana nemapurogiramu ekutanga ebheteri eApple. Yakaedzwa zvakazara mapeji 99% uye kumusoro kwekambani yekare yebhetri yeApt. Zvakanakisisa pakugadzirisa mabhizimisi ebasa rekutengesa. Kwete kutevera kushanda kwepamusoro kwekushandisa kushandiswa kwezvinhu zvisingadhuri pashuremarket hupenyu hutakiti mabhetri! Dzorera bhatiri mufoni yako uye uite mutengo wakakwana (uchishandisa teja yekutanga yeApple chete).
Unganidza kuIndaneti neWiFi uye utambe paIndaneti HD video Panguva Yakafanana. (Mavambo matsva anonzi Apple iPhone pawebsite yavo: kushandiswa kwepaIndaneti: Kusvika maawa gumi nemaviri pa Wi-Fi, kana kutamba video yeHD: Kusvikira maawa gumi nemaviri).
iPhone 8 Plus Battery brandnew iPhone 8 Plus bateri iPhone 8 Plus bhetri replacement 0 cycle iPhone 8 Plus bateri iPhone 7 Plus Battery